Lego Star Wars AT-AT – သင်သိလိုသမျှ- Brick Fanatics
Lego Star Wars AT-AT - သင်သိလိုသမျှ
The Empire Strikes Back ရှိ ဟော့သ်၏ ရေခဲလွင်ပြင်များကို ပထမဆုံး တုန်လှုပ်သွားသည့် အချိန်မှစ၍ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော Imperial All-Terrain Armored Transport (သို့မဟုတ် AT-AT) သည် ရုပ်ရှင်ကြည့်သူများအပေါ် ဖျောက်ဖျက်၍မရသော အမှတ်အသားတစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပြီး ပိုပို၍ ထူးထူးခြားခြား၊ Star Wars ပရိသတ်များ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။
ထို့ကြောင့် AT-AT သည် အနည်းငယ် အံ့သြစရာ ကောင်းသည်။ Lego Star Wars စိတ်ကူးယဉ်နိုင်သော အတိုင်းအတာတိုင်းနီးပါးတွင် အဖန်ဖန် အဖန်ဖန် လှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီး အဓိကဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အဲဒါတွေအားလုံးကို ဦးဆောင်တယ်။ Ultimate Collector Series ဗားရှင်းအသစ်စက်စက်အရွယ်အစား၊ အပိုင်းအစများနှင့် ရည်မှန်းချက်အတွက် Imperial Walker ၏ ယခင်ထပ်ကျော့မှုတိုင်းကို ချေမှုန်းပစ်သည်။
Lego Star Wars UCS ကို AT-AT
ယင်း နောက်ဆုံးဒီမှာ: အ Lego Group သည် နောက်ဆုံးတွင် ပထမဆုံး Ultimate Collector Series AT-AT ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် 6,785 ကျပ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာသည် ။ 75313 ကို AT-AT အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ဒုတိယအကြီးဆုံး Lego Star Wars အချိန်အားလုံးကို သတ်မှတ်ထားသည် - နောက်တွင်သာ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon – UK တွင် £749.99 ၊ US တွင် $799.99 နှင့် Europe တွင် €799.99 တို့နှင့် ကိုက်ညီရန် စျေးနှုန်းပါရှိပါသည်။ (ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက အဲဒါကို ဖြစ်စေတယ်။ စျေးအကြီးဆုံး LEGO အစုံ ယူကေမှာ။)
ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအတွက်၊ ငါတို့တော်တော်များများက မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုကို ရလိမ့်မယ်- အလွန်ကြီးမားသော ခြေလေးချောင်း၊ Lego အပိုအကူအညီမလိုဘဲ မတ်တပ်ရပ်နိုင်သော တုတ်ကောက်။ ၎င်းသည် အသေးစိတ် သို့မဟုတ် အလှတရားအတွက် အသုံးစရိတ်မဟုတ်ပေ၊ ဘေးဘောင်များပေါ်မှ ပွင့်ထွက်ကာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အသေးစိတ်ကျသော အတွင်းခန်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ Snowtroopers ၄၀. (အဲဒါက အသစ်ပါ။ 75320 Snowtrooper စစ်တိုက် Pack ကို ပိုတောင် အချိန်ပိုကောင်းတယ်။)
ရလဒ်မှာ အတိအကျ A ဖြစ်သည်။ Lego AT-AT သည် သင်တွေ့ဖူးသည့်အတိုင်း၊ အများအပြားအတွက် အမှန်တကယ် သန့်ရှင်းသော grail တစ်ခုဖြစ်သည်။ Lego Star Wars စုဆောင်းသူ။ နို၀င်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ မှာ စတင်ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့ - အလွန်လျင်မြန်စွာ ရောင်းထွက်သွားသည်မှာ သေချာသည်၊ ထို့ကြောင့် သင်၏မိတ္တူကို လုံခြုံစေရန် တိုက်ရိုက်လွှင့်ပြီးသည်နှင့် သင့်လက်ချောင်းကို ခလုတ်ပေါ်တင်လိုက်ပါ။ သငျသညျနောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုခုလိုအပ်ပါက, ငါတို့ကိုထွက်စစ်ဆေးပါ။ ရေးသားထားသောပြန်လည်သုံးသပ် နှင့် ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှစ်ခုစလုံးသည် ဤသားရဲ၏တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သို့ နက်နဲစွာ စေ့ငုကြည့်ကြသည်။
အထင်ရှားဆုံး မော်တော်ကားများထဲမှ တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်သည်။ Star Wars Millennium Falcon၊ X-wing နှင့် TIE Fighter တို့နှင့်အတူ သမိုင်းကြောင်းတွင် AT-AT သည် အင်ပါယာမှ ကိုင်စွဲထားသော စစ်တပ်၏ အတုယူဖွယ် သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။ 1980 တုန်းက ပြန်ရောက်တယ်။ Star Wars ဖောင်းပွ ခေါင်မိုးကိုဖြတ်သွားသည် (နောက်ဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ) ၎င်းသည် အပိုင်း IV လွန်ရှုခင်းတွင် ပရိသတ်များကို နှုတ်ဆက်သည့် ပထမဆုံးမြင်ယောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဲဒါက ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက် Star Wars နောက်ဆက်တွဲသည် ရုပ်ရှင်ကြည့်သူများ၏စိတ်တွင် AT-AT ကို ခိုင်မြဲစေရန် ကူညီပေးခဲ့သော်လည်း လမ်းလျှောက်သူ၏ ခြိမ်းခြောက်နေသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိနေခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းသည် တူညီမည်မဟုတ်ပေ။ အောက်နှင်းထူထပ်သောမြေပြင်ထက်တွင် မြင့်မားသော AT-AT သည် နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ အားသာချက်များအတွက် 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် များစွာ' ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် - အနည်းဆုံး အဆိုအရ၊ Star Wars ဒေတာဘဏ် - ကြီးမားပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေးပုံတစ်ပုံကို ကြည့်ရုံဖြင့် သိသာထင်ရှားပါသည်။
ထိုအရည်အသွေးများကို ပြန်လည်ဖန်တီးခြင်း။ Lego ပုံစံသည် သေးငယ်သော စွမ်းဆောင်ချက်မဟုတ်သော်လည်း ယနေ့အထိ၊ 2003 ၏ 4483 AT-AT မှ ထွက်ရှိခဲ့သော အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော လမ်းလျှောက်သူအများစုသည် ယာဉ်၏ ခံ့ညားသောသဘာ၀ကို ဖမ်းယူရာတွင် အံ့အားသင့်ဖွယ်အောင်မြင်နေပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း playset-scale AT-ATs အတွက်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းအချက်သည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အတိုင်းအတာအထိ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မော်ဒယ်တစ်ခုကို ပေးအပ်ရာတွင် အတော်လေးနေရာယူထားသည်။ Lego လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဘဏ်ကိုမချိုးဘဲ (စိတ်ကူးစိတ်သန်းအနည်းငယ်ဖြင့် Snowspeeders)။
စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုရင် လုံးဝမှုတ်သင့်တယ်။ Lego အလွန်ကြီးမားသော AT-AT တစ်ခုတည်းအတွက် ဘတ်ဂျက်ငွေသည် ကောလဟာလ UCS ဗားရှင်းသည် ထိုကွာဟချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပုံရသည်။ သို့သော် ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်၊ ဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင် အခြားသော မွေးရာပါစိန်ခေါ်မှုကို အနိုင်ယူရန် လိုအပ်သည်။ Lego AT-AT- ၎င်း၏ကြီးမားလှသော ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦးခေါင်း၏ အလေးချိန်ကို ခံနိုင်သော ခြေထောက်လေးချောင်းပေါ်တွင် မတ်တပ်ရပ်နိုင်စေရန် အာမခံပါသည်။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 1,200 ပါသော လမ်းလျှောက်သမားများအတွက်၊ ဒါက သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် p ကိုဆောင့်လိုက်တဲ့အခါart အပိုင်းအစ ၇၀၀၀ နီးပါးအထိ ရေတွက်ပါ။ 75313 ကို AT-AT ၎င်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည် – အမှန်ပင်၊ တည်ငြိမ်မှုကို UCS AT-AT ၏ ပင်မအတားအဆီးအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မှတ်ယူထားပြီး စင်ပေါ်တက်ရန် အဘယ်ကြောင့် အနှစ် 20 ကျော် ယူခဲ့ရကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ကျေးဇူးပါပဲ၊ အဲဒါက ပြဿနာတစ်ခုပါ။ Lego အုပ်စုရှိပါတယ် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဘို့ 75313 ကို AT-AT...
Lego Star Wars AT-AT မှတ်တမ်း
နှစ်ပေါင်းများစွာ, Lego Star Wars ပရိသတ်များသည် မူလ 4483 AT-AT ကို ပလေးဆက်စကေး ဒီဇိုင်း၏ အထွတ်အထိပ်အဖြစ် - နောက်ဆက်တွဲ ဗားရှင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးသည့်တိုင် ပရိတ်သတ်များက ကိုင်စွဲထားသည်။ အခုပြန်ကြည့်တော့၊ 1,064-piece set ဟာ သူ့ဘာသာသူ ထိန်းထားနိုင်လို့ ကွဲလွဲနေတဲ့ ရှုထောင့်တစ်ခုလို့ ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။
2003 မော်ဒယ်သည် လမ်းလျှောက်သူ၏ အချိုးအစားများကို တိကျမှန်ကန်စွာ ပြန်လည်ဖန်တီးပေးသည့်အတွက်ကြောင့်၊ နောက်ပိုင်းတွင် တင်ဆက်မှုများသည် အမြဲတမ်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းကို ပထမဆုံးအဖြစ် သဘောကျစွာ မှတ်မိနေပါသည်။ Lego Star Wars Snowtrooper minifigures များပါ၀င်သည် ။ အဆိုပါ Hoth စစ်သားများသည် 8084 Snowtrooper Battle Pack ကို 2010 ခုနှစ်တွင် ပွဲဦးထွက်သည်အထိ နောက် ခုနစ်နှစ်ကြာအောင် ခက်ခဲစွာ သက်သေပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မူလတုတ်ကောက်ကို 4489 AT-AT၊ စart ၏ Lego Star Wars' တိုတောင်းသော Mini subtheme နှင့် Imperial ယာဉ်၏ သင့်လျော်သော အပန်းဖြေမှု 98 အပိုင်းသာရှိသည်။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ၊ ၎င်းသည် လာမည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း AT-AT ၏ spectrum၊ scale နှင့် price point တိုင်းကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်လာမည့် ရှေ့ပြေးနိမိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Lego Star Wars တန်းစီပါ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် AT-AT ၏ နောက်ထပ် 10 ကြိမ် ထပ်မံပြုလုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် သေးငယ်သော၊ သတ္တုပြားထုပ်ပိုးထားသော မဂ္ဂဇင်းအလကားနှင့် မိုက်ခရိုတိုက်လေယာဉ်များမှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအထိ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ နည်းပညာ-driven အစုံများ၊ စစ်မှန်သော playset-စကေးမော်ဒယ်များနှင့် Ultimate Collector Series ဗားရှင်းအသစ်။
10178 Motorized Walking AT-AT သည် အဆိုပါ ပေါင်းစပ်မှုတွင် အထူးဖော်ပြခြင်း ခံထိုက်ပါသည်။ Lego Group သည် ယနေ့အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသည့်အရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်တိုင်းတွင် အထူးခြားဆုံး LEGO အစုံ. အလှအပရေးရာတွင် လိုအပ်သော အလျှော့အတင်းများ ပြုလုပ်သည့်အခါတွင်၊ ၎င်းသည် အခြားအရာများထက် ပိုတိုပြီး ပိုတိုသည်။ Lego AT-ATs နှင့် ၎င်း၏ အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများ - ၎င်းသည် ယခင်က သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် အရာအားလုံးထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
၎င်းတွင် 2010's 8129 AT-AT Walker နှင့် 2014's 75054 AT-AT တို့ ပါဝင်ပါသည်။ နှစ်ခုလုံးက p မဟုတ်ဘူး။artဆိုးရွားလှတဲ့ အတွဲတွေ ၊ မှန်ကန်တဲ့ မှတ်စုတွေ အားလုံးကို ရိုက်မိကြတယ် - အထူးအထင်ကြီးစရာ မဟုတ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ အချိုးအစား၊ အသေးစိတ် သို့မဟုတ် ပုံသေးရွေးချယ်မှုတွင်ဖြစ်စေ၊ ထိုအစုံနှစ်ခုစလုံးသည် တိုးတက်မှုအတွက် နေရာချန်ထားခဲ့သည်၊ 2020 တွင် သိသိသာသာ-ပိုကောင်းလာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နောက်ပိုင်းတွင်တွေ့မြင်နေရပါသည်။ 75288 ကို AT-AT.
Imperial walker သည် 2014 ခုနှစ်တွင် chibi-style sets များကို မိတ်ဆက်ပြီးကတည်းက Microfighter တစ်စီးထက် ပိုခံစားနိုင်သော ကားအနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး 2015 ၏ 75075 AT-AT Microfighters တွင် ပထမဆုံး၊ ထို့နောက် 2021 ၏ 75298 AT-AT နှင့် Tauntaun Microfighters တို့နှင့် ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ မဂ္ဂဇင်းအချို့ကို အလကားရိုက်ထည့်ပါ၊ ဘတ်ဂျက်တိုင်းနီးပါးအတွက် AT-AT တစ်ခုရရှိပါသည်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် Lego Group သည် ၎င်းကိုတင်ပြရန်ရွေးချယ်သည်၊ AT-AT သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆက်မပြတ်တည်ရှိနေမည်မှာ သေချာပါသည်။ Lego Star Wars တန်းစီသည်။ ဘယ်တော့လဲ 75313 ကို AT-AT UCS မော်ဒယ်အပါအဝင် အနည်းဆုံး ဗားရှင်းသုံးမျိုး တစ်ပြိုင်နက် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 75288 ကို AT-AT နှင့် 75298 AT-AT နှင့် Tauntaun Microfighters ။
အကြင် အသက်ရှည်၏။ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon နှင့် 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer မည်သည့်ညွှန်ပြချက်မဆို 75313 ကို AT-AT အခြား သေးငယ်သော အစုံများ အနားယူပြီးသည့်နောက် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ဖွယ်ရှိသည် - နှင့် အသစ်သော playset-စကေးဗားရှင်းများကို မိတ်ဆက်သည့်အခါတွင်ပင် ဖြစ်နိုင်သည်။
Lego Star Wars AT-AT ကို Walker က
အကယ်၍ သင်သည် ဘဏ်ကိုမချိုးဖျက်နိုင်သော AT-AT နောက်မှ ရောက်နေပါက သို့မဟုတ် ၎င်းထက် မြန်မြန်လိုချင်သည်။ Black ကသောကြာနေ့, ဘယ်တော့လဲ 75313 ကို AT-AT လွှင့်တင်ရန် အတည်ပြုထားသည် - ကြည့်ရှုရန် 75288 ကို AT-AT. ဒီဇိုင်းတွင် 2003 ၏မူလ 4483 AT-AT ကို အမှန်တကယ်ကျော်လွန်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော Imperial Walker ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ 2020 ၏မွမ်းမံထားသောဗားရှင်းသည် အကြီးဆုံး၊ အဝဆုံးနှင့် အလုံးစုံ အကောင်းဆုံး AT-AT Lego အဖွဲ့သည် ပလတ်စတစ်ကို ပြုလုပ်ရန် ကတိပြုထားသည်။
8129 AT-AT နှင့် 75054 AT-AT ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများတွင် နောက်ဆုံးတွင် အသေးစားရုပ်ပုံနှစ်ခုကို ဘေးချင်းကပ်လျက် တပ်ဆင်နိုင်သည့် လေယာဉ်မှူးခန်း ပါဝင်သည်။ အချိုးအစားပိုကောင်းသော ခြေထောက်များနှင့် ပိုမိုကြီးမားသော ခန္ဓာကိုယ်၊ နှင့် ပိုမိုအသေးစိတ်ပြီး ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသော အတွင်းခန်း။ ရုပ်ပုံအသေးစားများကို ရက်ရက်ရောရော ကူညီပေးခြင်းဖြင့်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပလေးဆက်စကေးတွင် တိကျသေချာသော AT-AT အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
ထိုအရွယ်အစားသည် ယနေ့အထိ UCS AT-AT မဟုတ်သော စျေးအကြီးဆုံးဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော်လည်း £139.99 / $159.99 / €149.99 သည် 1,267 အပိုင်းပိုင်းနှင့် Luke Skywalker၊ General Veers၊ Snowtroopers နှစ်ယောက်အတွက် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော သဘောတူညီချက်တစ်ခုအဖြစ် မခံစားရသေးပါ။ AT-AT လေယာဉ်မှူးနှစ်ဦး။ Speeder bike နှင့် E-Web turret လည်း ရှိသည် - မည်သည့်အတွက်မဆို ထင်ရှားသော အမှတ်အသား နှစ်ခုလုံးပါရှိပါသည်။ Lego AT-AT – မှ…
Lego Star Wars AT-AT အသေးစားရုပ်ပုံများ
အဆိုပါ minifigure line-up ကို Lego Group ၏ AT-ATs များသည် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း ကြီးမားစွာမပြောင်းလဲခဲ့ဘဲ အကြောင်းပြချက်ကောင်းဖြင့်- မည်သည့် Hoth set နှင့်မဆို ပါ၀င်ရမည့် အဓိကဇာတ်ကောင်များ ရှိနေပြီး အထူးသဖြင့် AT-AT ပါ၀င်သည့် မည်သည့် Hoth set နှင့်မဆို ပိုမိုတိကျပါသည်။
ထိုစာရင်းတွင် ပထမဦးစွာ အနည်းဆုံး AT-AT Pilot တစ်ခုဖြစ်သည်၊ 2003 ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်ရှိခဲ့သော playset-scale AT-AT တစ်ခုစီတိုင်းနှင့် အဆက်မပြတ်ရှိနေသော AT-AT Pilot တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအရေအတွက်သည် နှစ်ဆတိုးလာသည်။ 75288 ကို AT-ATနောက်ဆုံးတွင် စခရင်ပေါ်ရှိ လေယာဉ်မှူးခန်းနှင့် လိုက်ဖက်သော လေယာဉ်မှူးနှစ်ဦး ဘေးချင်းကပ်ထိုင်ရန် လမ်းလျှောက်သူ၏ ခေါင်းတွင် အခန်းကို တိုးချဲ့ထားသည်။ အဆိုပါအသေးစားရုပ်ပုံအတွက် ယေဘူယျချဉ်းကပ်ပုံသည် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော TIE Pilot မှိုများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရုံသာမက 2014 ၏ 75054 AT-AT တွင် အဖြူရောင်အခြေခံမှ မီးခိုးရောင်သို့ပြောင်းကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် အရောင်အသွေးအစီအစဥ်များကို နှစ်သက်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
မည်သည့် AT-AT အတွက်မဆို ရှိရမည့် ဒုတိယပုံသေးသေးသည် စင်စစ်အားဖြင့်၊ Snowtrooper သို့မဟုတ် Snowtroopers အများအပြား ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် မြေပြင်သံချပ်ကာဖြစ်သောကြောင့်၊ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား, နောက်ဆုံးတော့။ ပထမဆုံး လမ်းလျှောက်သူ သုံးဦးစလုံးတွင် Snowtrooper နှစ်ဦးသာ ပါ၀င်ပြီး 75054 AT-AT သည် ရှေ့နောက် သုံးခုအထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 75288 ကို AT-AT ထို့နောက် ၎င်း၏ နှင်းထူထပ်သော စစ်သားကို နှစ်ကြိမ်ပြန်ရေတွက်ကာ ၎င်း၏ရှေ့တော်ဆက်တစ်ဦးကို ဒုတိယ AT-AT လေယာဉ်မှူးဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
အင်ပါယာက ဆက်ပြောသည် Lego AT-ATs သည် 2007 ၏ 10178 Motorized Walking AT-AT မှစတင်၍ playset-scale walker တစ်ခုစီတွင် ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်ပေါ်လာသော General Veers ဖြစ်သည်။ သူ၏ minifigure သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ပါ၀င်သည့် ဗားရှင်းတွင် အဆုံးစွန်သွားခဲ့သည်။ 75288 ကို AT-AT2018 ခုနှစ်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကို လက်ဆောင်ပေးသည့် ခမောက်ပုံစံအသစ် 75211 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ်ပုံသွင်းမျက်မှန်များ အစုံအလင်။ ၎င်းသည် Veers တွင်ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းတိကျသည်။ Lego ပုံစံ နှင့် ပုံစံတူ ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ထပ်ဖြည့်ထားသောကြောင့် မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်နိုင်မည်ကို ကြည့်ရန် ခက်ခဲသည်။ 75313 ကို AT-AT.
AT-AT သည် Imperial စက်ဖြစ်သောကြောင့် အာရုံစူးစိုက်မှုကို မျှော်လင့်ရန် မျှတပါသည်။ Star Wars'လူဆိုးလေးများ - ဒါတွေအားလုံးကလွဲရင် တစ်မျိုး Lego ယနေ့အထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် လမ်းလျှောက်သမားများတွင် သူပုန်မဟာမိတ်အဖွဲ့၏ ကိုယ်စားပြုမှုအချို့ ပါဝင်ပါသည်။ Luke Skywalker သည် The Empire Strikes Back ၏အဖွင့်တိုက်ပွဲမှ ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် Jedi-in-training ၏သော့ချက်အား ပြန်လည်ဖန်တီးရန်အတွက် (75054 AT-AT) မှလွဲ၍ အားလုံးတွင် ပေါ်လာပါသည်။
2010 ၏ 8129 AT-AT Walker သည် နောက်ထပ်ခြေတစ်လှမ်းတိုးသွားသော်လည်း မည်သူ့ကိုမျှ မဆုံးဖြတ်ရသေးသည့် အကြောင်းရင်းအတွက် တာဝါတိုင်တပ်ထားသည့် သူပုန်စစ်သားတစ်ဦးဖြစ်သော Han Solo နှင့် C-3PO ကို ပစ်ချခဲ့သည်။ အမည်ပေးထားသည့် ဇာတ်ကောင်နှစ်ဦးစလုံးသည် ဟော့သ်တိုက်ပွဲတွင် သေချာပေါက်ရောက်ရှိနေသော်လည်း အင်ပါယာ၏စက်မှုဆိုင်ရာကြောက်မက်ဖွယ်ရာများကို နင်းချေရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော လူဆိတ်ညံနေသောကမ္ဘာမြေပြင်၏ လွင်ပြင်တစ်ဝိုက်တွင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မလှည့်စားခဲ့ကြပေ။
သိချင်သောမော်ဒယ်သည် လက်ရှိတွင် မည်သည့်အသေးစားရုပ်ပုံအရေအတွက်ကိုမဆို အများဆုံးကြွားဝါသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ Lego သို့သော် AT-AT စုစုပေါင်း ရှစ်ခုဖြင့် အနည်းဆုံး အချိန်အထိ 75313 ကို AT-AT လွှင့်တင်ပြီး စာလုံးတစ်လုံးတည်းဖြင့် ပစ်သည်။ ၎င်းသည် Han Solo သို့မဟုတ် Threepio မဟုတ်သော်လည်း၊ UCS ဗားရှင်းတွင် General Veers၊ AT-AT Pilots နှစ်ဦး၊ Luke Skywalker နှင့် ငါး Snowtroopers များ။
ဒါကို AT-AT နဲ့ပတ်သက်ရင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေအများကြီးပါ။ Black ကသောကြာနေ့. ယနေ့အထိ Walker ၏ အကောင်းဆုံး playset-စကေးဗားရှင်းကို ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေးလည်း ရှိသေးသည်မဟုတ်ပါ ။ 75288 ကို AT-AT - စင်ပေါ်စတင်ရောက်ရှိပြီး တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးတွင် လျှော့စျေးအချို့ကို ခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်သည် ဖြန့်ချိမည့်ရက်လည်းဖြစ်သည်။ 75313 ကို AT-AT.
လကုန်တွင် Imperial လမ်းလျှောက်သမားများအတွက် ရွေးချယ်မှုများအတွက် သင်သည် လုယူခံရလိမ့်မည်၊ သို့ဆိုလျှင် ၎င်းတို့နှစ်ဦးကြားတွင် စျေးနှုန်းနှင့် အရွယ်အစားမှာ အလွန်ကြီးမားသော ပင်လယ်ကွေ့တစ်ခုရှိနေသော်လည်း သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် နေရာလွတ်နှင့် ငွေသားအားလပ်ချိန်များ ရှိနေပါက၊ Ultimate Collector Series ဗားရှင်းသည် သင့်စာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှဖြစ်သင့်သည်။
ပြခန်းအတွက် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်နှင့် အခန်းနှစ်ခုစလုံးတွင် အရာများကို အနည်းငယ်ပို၍ စီမံခန့်ခွဲလိုလျှင် စောင့်ကြည့်ပါ Brick Fanatics ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ်းလှမ်းမှုများအပေါ်တွင်မဆို 75288 ကို AT-AT ဖြတ်. Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021 ၌တည်၏။